Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Croatia Luka Modric diiday dalabka Inter Milan - Hoyga Wararka
Home Sports News	Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Croatia Luka Modric diiday dalabka Inter Milan
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Croatia Luka Modric diiday dalabka Inter Milan
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Croatia Luka Modric ayaa lagu soo waramayaa inuu diiday dalabka Inter Milan ee ah inuu ku biiro Real Madrid islamarkaana uu saxiixo qandaraas cusub .
Sida wararka maanta Sheegayaan Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Luka Modric ayaa go’aansaday inuu saxiixo qandaraas cusub oo uu kooxda kula sii joogayo, isagoo Meesha Kasaarey Rajadii Inter Milan Ay Ka Qabtey Xagaagan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Croatia ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Serie A todobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo tababaraha Inter Luciano Spalletti uu si cad u sheegay inuu xiiseynayo ciyaaryahanka khadka dhexe. Kooxda Inter Milan ayaa la fahamsan yahay inay diyaar u tahay inay bixiso 10 milyan oo ginni ah oo qandaraas ah oo uu Modric ka tagayo Santiago Bernabeu xagaagaan.
Warar horay u soo baxay bishaan ayaa sheegaya in 32 jirkaan uu u furan yahay inuu u dhaqaaqo,
Si kastaba ha ahaatee, suxufiyiinta Madrid ayaa meesha ka saaray inay iibinayaan iyagoo sheegay in qaabka kaliya ee Modric uu bixi lahaa hadii koox kale ay ku bixineyso qandaraaskiisa 750 milyan oo euros.
Kooxda liverpool oo lagu amaaney Heshiishyadii ay gashey
Inter Milan Oo Dooneysa Saxiixa Luka Modric
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa qirtay Qaladkiisa...
Isbarbardhigga Luis Suarez iyo Karim Benzema Sidey kula...
Man United ayaa dooneysa 26-sano jirkan hadii David...
Manchester United Ayaa Iska joojisey iney Ciyartoy Iibsato...
Sida ay Manchester United u wajihi doonto kooxda...
Sadio Mane Oo Heshiis Cusub U Saxiixay Kooxda...
Dareenka Jose Mourinho EE Ku Aadan Tababaraha Chelsea...
Chelsea FC oo diyaar u ah inay 40...
Suurta Galnimada Liverpool ay dib ula midoobi Karto...
Kooxda heysata horyaalka yurub ee Real Madrid ayaa...